Tux Paint 0.9.27, nohavaozina ity fampiharana sary ho an'ny ankizy ity | Ubunlog
Tux Paint 0.9.27, havaozina ity fampiharana sary ho an'ny ankizy ity
Damien A. | 04/12/2021 14:14 | Ubuntu
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hojerentsika ny Tux Paint 0.9.27. Ity dia ny fanavaozana farany navoakan'ity rindranasa fanaovana sary maimaim-poana, cross-platform, open source natao ho an'ny ankizy ity. Tux Paint dia programa fanaovana sary maimaim-poana sy nahazo loka ho an'ny ankizy 3-12 taona. Ity fampiharana ity dia ampiasaina any amin'ny sekoly manerana izao tontolo izao ho fitaovana fianarana. Ity programa ity dia manambatra ny interface tsotra miaraka amin'ny vokatry ny feo mahafinaritra.
Tux Paint 0.9.27 dia eto efa ho efa-bolana taorian'ny dikan-teo aloha, dia mampiditra fomba vaovao amin'ny fisarihana ny programa. Tafiditra ao anatin'izany ny fitaovana vaovao tsy latsaky ny enina, toy ny Panels amin'ny fampihenana sy fanaovana dika mitovy amin'ny kisary 2-by-2 toy ny ampiasaina amin'ny tantara an-tsary.
1 Toetra ankapoben'ny Tux Paint 0.9.27
2 Ampidino ny Tux Paint 0.9.27
Toetra ankapoben'ny Tux Paint 0.9.27
Manohana izao ny fitaovana fandokoana sy tsipika an'ny Tux Paint borosy mihodinkodina araka ny zoron'ny kapoka. Ity endri-pihodinana ity, ary koa ireo endri-borosy mihetsiketsika taloha sy mitari-dalana, dia asehon'ny mpanangona endrika borosy ankehitriny. Fanampin'izany, ny fitaovana Fill dia manolotra fomba fandokoana maimaim-poana ho an'ny fandokoana ifanakalozan-kevitra ao anatin'ny faritra iray.
Vaovao ihany koa ao amin'ny Tux Paint 0.9.27 ny borosy 'mihodinkodina', ny fahafahana mampiseho ny zoro fihodinana ao amin'ny toromarika eo amin'ny farany ambany ny efijery rehefa manao tsipika na mihodinkodina endrika iray, ary koa fanohanana fitaovana majika bebe kokoa hanavao ny bara fandrosoana rehefa manao sary.
Nampiana fitaovana ody enina vaovao ho an'ny Tux Paint. Mihena ny tontonana ary mamerina ny sary amin'ny tsipika 2 amin'ny 2, izay ilaina amin'ny fanaovana tantara an-tsary efatra. Ny iray amin'ireo fitaovana vaovao dia hamokatra loko mifameno. Misintona tselatra ny tselatra. Ny fisaintsainana dia mamorona taratry ny farihy amin'ny sary. Ny fitaovana dia haninjitra, haninjitra, ary hamirapiratra ny sary toy ny fitaratra trano mahafinaritra. Farany, ny Smooth Rainbow dia manome fiovaovana miandalana kokoa amin'ny fitaovana mahazatra Rainbow.
ihany koa fitaovana ody maro efa misy no nohavaozina. Nisy fanatsarana natao tamin'ny Halftone, izay manao sary amin'ny gazety. Ny fitaovana Sariitatra dia mahatonga ny sary ho toy ny sary sariitatra, ary ny fahitalavitra dia manao sary mihetsika amin'ny fahitalavitra.
Ny fitaovana majika dia mitambatra izao amin'ny fanangonana vokatra mitovy.
Ity kinova ity koa manatsara ny fitaovana Blocks, Cartoon, Chalk, Emboss ary Halftone Magic miaraka amin'ny fahafahana manova ny sary manontolo indray mandeha, ary manavao ny fitaovana TV Magic mba hizarana ireo pikantsary ho singa mena / maitso / manga.
La antontan-taratasin'ny mpampiasa Nohavaozina ihany koa ny Tux Paint, ary ny programa Tux Paint Config dia nohavaozina mba hanohanana tsara kokoa ny fampisehoana lehibe kokoa sy avo lenta kokoa.
Ary koa sVoalamina ny bug kely sasanys.
Santionany amin'ireo endri-javatra sy fanatsarana nampiana tamin'ity dikan-teny vaovao ity. Raha mila antsipiriany bebe kokoa momba ny fanovana tafiditra ao amin'ny Tux Paint 0.9.27, ireo mpampiasa izay maniry dia afaka tsidiho ny pejy izay nanambaran'izy ireo ny Change Log feno.
Ampidino ny Tux Paint 0.9.27
Ireo mpampiasa Ubuntu, tsy hahita fonosana .deb ho an'ny to download Tux Paint 0.9.27 avy amin'ny tranokala ofisialy. Saingy tsy misy olana, raha manana ity teknolojia ity ianao ao amin'ny rafitrao, koa ity programa ity dia hita ao amin'ny Flathub toy ny fonosana Flatpak. Raha mampiasa Ubuntu 20.04 ianao, ary mbola tsy manana an'io teknolojia io amin'ny solosainao, dia afaka manohy ianao. The Guide Nisy mpiara-miasa nanoratra tao amin'ity bilaogy ity momba izany.
Ao amin'ny Ubuntu dia ilaina ihany ny manokatra terminal (Ctrl + Alt + T) ary mihazakazaka ao ny baiko fametrahana:
Rehefa vita ny fametrahana dia afaka mikaroka ny mpandefa an'ity programa ity amin'ny rafitray izahay. Ankoatra izany, dia hanana ny mety ho manomboka izany amin'ny fanoratana amin'ny terminal:
flatpak run org.tuxpaint.Tuxpaint
Para esory ity programa ity, mila manokatra terminal fotsiny ianao (Ctrl + Alt + T) ary mihazakazaka ao:
flatpak uninstall org.tuxpaint.Tuxpaint
Ny Tux Paint dia ampiasaina any an-tsekoly manerana izao tontolo izao ho toy ny asa fanaovana sary amin'ny informatika. Ity programa ity dia manambatra ny interface mora ampiasaina, ny vokatry ny feo mahafinaritra ary ny sariitatra mascot izay mitarika ny ankizy amin'ny fampiasana ilay programa.. Ny seha-pifaneraserana amin'ny programa dia manolotra lamba tsy misy na inona na inona ho an'ny ankizy sy fitaovana fanaovana sary isan-karazany, mba hahafahan'izy ireo mamoaka ny fahaizany mamorona. Raha mila fanazavana fanampiny dia afaka maka hevitra ny mpampiasa tranokalan'ny tetikasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Tux Paint 0.9.27, havaozina ity fampiharana sary ho an'ny ankizy ity
Heroes of Might and Magic II 0.9.10 dia efa nivoaka ary ireo no vaovao
Ny KDE Spectacle dia ahafahantsika manisy fanamarihana mivantana avy amin'ny fampahafantarana